Intestinal Tuberculosis (အူလမ်းကြောင်းတွင် တီဘီဖြစ်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Intestinal Tuberculosis (အူလမ်းကြောင်းတွင် တီဘီဖြစ်ခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Intestinal Tuberculosis (အူလမ်းကြောင်းတွင် တီဘီဖြစ်ခြင်း)
Intestinal Tuberculosis (အူလမ်းကြောင်းတွင် တီဘီဖြစ်ခြင်း) ကဘာလဲ။
တီဘီဆိုတာဖွံဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာအဖြစ်များတဲ့ဘက်တီးရီးယားရောဂါပိုးဖြစ်ပြီးအူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါလက္ခဏာအပါအဝင် ရောဂါလက္ခဏာအမျိုးမျိုးပြနိုင်ပါသည်။ တီဘီရောဂါသည်ကူးစက်လွယ်ပြီးဆေးကုသမှုချက်ချင်းယူရန်လိုအပ်ပါသည်။
အူလမ်းကြောင်းတွင် တီဘီဖြစ်ခြင်းသည် ဖွံဖြိုးဆဲနိင်ငံများတွင်အဖြစ်များပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်ရောဂါလက္ခဏာပြသခြင်းမရှိပါ။
Intestinal Tuberculosis (အူလမ်းကြောင်းတွင် တီဘီဖြစ်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုလျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Intestinal Tuberculosis (အူလမ်းကြောင်းတွင် တီဘီဖြစ်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
တိတိကျကျပြော၍မရပါ။ များသောအားဖြင့်ဗိုက်တစ်ပြင်လုံး(သို့)ဗိုက်တစ်နေရာမှအောင့်ခြင်း၊ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၊ညဘက်ချွေးစေးပြန်ခြင်း၊ဖျားခြင်း၊အန်ခြင်း၊နုံးခြင်း၊ဝမ်းလျော၊ဝမ်းပိတ်ခြင်း(သို့)ဝမ်းထဲသွေးပါခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ပါသည်။ အူလမ်းကြောင်းတွင်အနာဖြစ်၍်ဝမ်းပျက်ခြင်း၊အူလမ်းကြောင်းကျဉ်း/ကျုံ့သွား၌ဗိုက်အောင့်ခြင်းများလဲဖြစ်တတ်သည်။ ဗိုက်အရမ်းအောင့်လျှင်အူပေါက်တာမျိုးလဲဖြစ်တတ်ပါသည်။
အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အထဲမှာမပါဝင်တဲ့ အခြားသောလက္ခဏာတွေလည်းရှိနိုင်ပါသေးသည်။ တကယ်လို့ကိုယ့်ဆီမှာရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုခုများရှိနေမလားဆိုပြီးစိုးရိမ်နေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါသည်။
သင့်ဆီမှာအထက်ဖော်ပြပါ ရောဂါလက္ခဏာတွေထဲကတစ်ခုခုများရှိနေမယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် မေးခွန်းတစ်ခုခုရှိနေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။
Intestinal Tuberculosis (အူလမ်းကြောင်းတွင် တီဘီဖြစ်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ထို့နောက်အူထဲသို့ဝင်ကာileum,jejunum,duodenumစသည့်အူသိမ်များကိုတစ်ဆင့်ခြင်းကူးစက်ပါသည်။ ပြန်ရည်ကြောတစ်ရှူးများပြားခြင်း၊ဘက်တီရီးယားပိုးကိုချေဖျက်မှုအားနည်းခြင်းတို့သည်အူသိမ်တွင်တီဘီဖြစ်မှုနှုန်းများစေပါသည်။ မီလီယာရီတီဘီတွင်လည်းသွေးမှတစ်ဆင့်အူထဲသို့ပျံနှံခြင်းတွေ့ရပြီးအနားမှအင်္ဂါမှတစ်ဆင့်ပျံနှံခြင်းလည်းရှိသည်။ ခန္ဓါကိုယ်ခုခံအားကျဆင်းချိန်တွင်ငြိမ်နေသောတီဘီပိုးသည်ထကြွတတ်ပါသည်။
Intestinal Tuberculosis (အူလမ်းကြောင်းတွင် တီဘီဖြစ်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Intestinal Tuberculosis (အူလမ်းကြောင်းတွင် တီဘီဖြစ်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
Barium enema and barium mealစမ်းသပ်မှု။
Intestinal Tuberculosis (အူလမ်းကြောင်းတွင် တီဘီဖြစ်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အူလမ်းကြောင်းတီဘီကိုဆေးကုထုံးနှင့်ခွဲစိတ်ခြင်းတို့ဖြင့်ကုသနိုင်သည်။ ခွဲစိတ်ကုသမှုကိုနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးများ ဖြစ်ပေါ်လာချိန်တွင် အလုပ်များသည်။
Isoniazid (300 mg) and rifampin (600 mg)ကို၁၈-၂၄လထိနေ့စဉ်သောက်ခြင်းသည်အဓိကကုထုံးဖြစ်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများကသင့်အနေဖြင့် တီဘီရောဂါကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာအကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ယခုလက်ရှိတီဘီဖြစ်နေသူသည်အခြားသူများကို မကူးစက်ရန်ဆရာဝန်မှစိတ်ချရပြီဟုမပြောမချင်းအိမ်တွင်သာနေသင့်သည်။ ရက်သတ္တပတ်လောက်ဝကာနိုင်ပြီးဆရာဝန်မှစိတ်ချရပြီဟုပြောမှသာပုံမှန်လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။
မိမိအိမ်သားများအားမကူးစက်စေရန်သတိထားရမည်။ လေမှတစ်ဆင့်ကူးစက်နိုင်သည့်အတွက်မျက်နှာဖုံးကိုနှာခေါင်းနှင့်ပါးစပ်လုံအောင်တပ်ဆင်ရမည်။ ချောင်းဆိုး၊နှာချေသည့်အခါတစ်ရှူးနှင့်ပါးစပ်အုပ်ပြီးနောက်အိတ်ထဲသို့ထည့်ကာလွှင့်ပစ်ရမည်။ အခန်းကိုလေဝင်လေထွက်ကောင်းအောင်ထားရမည်။ ပန်းကာကိုပြူတင်းပေါက်နားထားခြင်းဖြင့်အခန်းကိုပိုးမွှားလျှော့ကျစေနိုင်ပါသည်။
အရေးအကြီးဆုံးမှာဆေးကိုအချိန်မှန်စွာနှင့်ကာလပြည့်အောင်သောက်ရန်ဖြစ်သည်။ ဆေးရပ်လိုက်ခြင်း(သို့)ကျော်သွားခြင်းဖြစ်လျှင်ဆေးမမတိုးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဆေးသောက်ရန်မိသားစုဝင်များအားသတိပေးခိုင်းခြင်းတို့လုပ်ဆောင်သင့်ပါသည်။
1. What is intestinal TB? https://www.zocdoc.com/answers/4551/what-is-intestinal-tb. Accessed2Jan 2017
2. Tuberculosis of small intestine.
http://www.ots1.narod.ru/oxford/part4/tub_smal_int.htm. Accessed2Jan
3. Tuberculosis. https://www.nationaljewish.org/conditions/tuberculosis-tb.
Accessed2Jan 20171. What is intestinal TB? https://www.zocdoc.com/answers/4551/what-is-intestinal-tb. Accessed2Jan 2017
Accessed2Jan 2017